काठमाडौं । अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडको शेयरमूल्य यो साता अस्वभाविक रुपमा वृद्धि भएको छ । गत साताको अन्तिम कारोबार दिन प्रतिकित्ता रू. ७०६ कायम रहेको कम्पनीको शेयरमूल्य यो साताको पहिलो कारोबार दिनदेखि नै शेयरमूल्यमा अस्वभाविक वृद्धि भइ अन्तिम दिन प्रतिकित्ता रू. १ हजार ३१ कायम भएको छ । यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ।
कम्पनीको हकप्रद शेयर निष्कासनको विषयमा पहिला नै सूचना चुहावट भएको भन्दै लगानीकर्ताहरुले महानगरिय प्रहरी कार्यालय, काठमाडौंमा उजुरी दिएका छन् ।
मंगलवार ५० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्कासनको प्रस्ताव सार्वजनिक हुुनुभन्दा अघिल्लो दिनदेखि नै कम्पनीको शेयरमूल्य अस्वभाविक रुपमा बढेकाले कम्पनीले सूचना चुहावट गरी भित्रि कारोबार गरेको आरोपमा लगानीकर्ताहरुले कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सहित ७ जना विरुद्ध लगानीकर्ताहरुले उजुरी दिएका हुन् ।
आम लगानीकर्ताहरुले पछिल्लो समय इन्साइडर ट्रेडिङको समस्या बढ्दै गएको भन्दै नियामक निकाय र बजार सञ्चालकले कडाई गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड र बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले सूचना चुहावटको प्रमाण भएमा कारवाही गर्ने बताइरहेका छन् ।
generic sildenafil 150mg - <a href="https://bestusasild.com/">viagra for men over 50</a> viagra 100mg for sale
levofloxacin 500mg brand - <a href="https://rcialipll.com/">cialis pill</a> order tadalafil 10mg generic
buy cozaar 25mg pills - <a href="https://esomeprazolen.com/">oral esomeprazole 40mg</a> promethazine 25mg cost